Aluminum pena / Aluminum Cut Wire pena - China Shanghai Bosun hasha
Steel Cut waya pena
Stainless Steel Cutwire bara
Black nesilicon Carbide
Aluminum pena / Aluminum Cut Wire bara
DZICHIBUDA Aluminum vendu waya pena iri achirera yaakaita nedanho kudhirowa, kucheka kutonhodza nezvimwewo .. ivo vari kushandiswa pose gadziriro kupfurikidza peening uye rikavapo pamusoro Aluminum, zingi kana mutete-rusvingo basa zvidimbu uye deflashing uye deburring nokuda nonferrous. Kunze kwavo dzinoratidzwa pa pachena zviitwe zvainoita hukawanika basa zvidimbu. unhu Aluminum oxide (AI2O3) zviri 70% 80%, rine zvakawanda tsvina dzakadai nesilicon oxide uye titanium oxide, dema ...
Tumira neindaneti kwatiri PDF Download
Aluminum vendu waya pena iri achirera yaakaita nedanho kudhirowa, nokuveza uye kutonhodza nezvimwewo .. ivo vari kushandiswa pose gadziriro kupfurikidza peening uye rikavapo pamusoro Aluminum, zingi kana mutete-rusvingo basa zvidimbu uye deflashing uye deburring nokuda nonferrous. Kunze kwavo dzinoratidzwa pa pachena zviitwe zvainoita hukawanika basa zvidimbu.
Aluminum oxide (AI2O3) zviri 70% 80%, rine zvakawanda tsvina dzakadai nesilicon oxide uye titanium oxide, munhu mutema corundum.Mainly inoshandiswa Stainless simbi, simbi zvigadzirwa, Manyiminya girazi, yemishenjere zvigadzirwa, pakuonekwa uye jecha rikavapo, riri mukugadzira mumwe nebwe nokugeda vhiri, achicheka discs, hasha Emery yokufungidzira
kambani yedu hatigoni kubuda rakarukwa bhegi kavha, ton bhegi kavha, huni tireyi kavha, epurasitiki chiputiriso kavha uye zvakafanana maererano vatengi zvinodiwa.
1.5 g / cm3
Aluminum pena ndiyo sarudzo wakakwana rokuchenesa mafomu pamwe akatunhidzwa nhengo kuti nyore damage kwakanyanya hombe arambe achirema kwebhosvo Médias. Aluminum pena racho mumiriri kukuru rokuchenesa aruminiyamu zvinoriumba asingagoni nevamwe alloys kushatisa pamusoro wavo.
Products rakajeka pamusoro kumugumo
Inoita apedzerana husina ferrous jabwanira
Zvinowanzoshandiswa simbi ufe Kudzingwa; zvakarurama Kudzingwa; Hardware michini kugadzira; repair zvishandiso uye vharafu Mazinga zvigadzirwa dzinongobuda kuchenesa, derusting, kuwedzera, rimire uye zvichingodaro.
Previous: Zingi pena / zingi Cut Wire bara
Next: Black Aluminum oxide
aluminum Cut Wire pena
aluminum kurira kwepfuti
pakuonekwa aluminum bara
Aluminum Shot 1.5mm
Aluminum Shot 1mm
Aluminum Shot 1.2mm
Aluminum Shot 2mm round
Sandblasting Media Market saizi iri expecte ...
2016-08-15 Sandblasting Media Market saizi iri taitarisira kukura pa 6,5% CAGR kubva 2016 kusvika 2023. Global sandblasting nhau musika saizi, bhuku nemashoko, iri kukura panguva pasi ...